Isitudiyo sezomnotho esihlukaniswe kancane nge-WIFI ne-cable TV! - I-Airbnb
Isitudiyo sezomnotho esihlukaniswe kancane nge-WIFI ne-cable TV!
Sainte-Rose, Basse-Terre, i-Guadeloupe
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Thierry
Studio sethu elise e Morne-Rouge edolobheni enhle yasemakhaya Sainte-Rose useduze yezitolo endaweni encane Nolivier kanye emaphandleni kanye ulwandle (ichweba elincane yokudoba Welch esibheke Grand Cul de Sac marin kanye umhlume).
Uzojabulela isilinganiso esihle sekhwalithi / intengo kanye nendawo enhle yesitudiyo sethu ukuze ukwazi ukuhambahamba eGuadeloupe!
Ifaneleka kahle imibhangqwana nabahambi abangashadile abafuna isisekelo esihlanzekile nesisebenzayo!
Isitudiyo esikhulu esixhumene (ngaphezu kuka-25m2 ngaphandle kokubala igalari encane) kodwa ehluke ngokuphelele (umnyango wangasese), ukonga ngekamelo lokulala elinesiphephetha-moya kanye nekhishi.
Itholakala kahle ukuvakashela i-Basse-Terre ukusuka eNyakatho kuya eNingizimu, kanye naseGrande Terre!
Ukufinyelela ku-inthanethi kwamahhala nge-WIFI nekhebula le-TV.
Ubude be-Studio: 8m30
Ububanzi bestudiyo: 3m
- Umbhede ongu-1 onenethi lomiyane
- Igumbi lokuhlala eli-1 / ikhishi elinetafula + izihlalo + usofa / umbhede + umoya wokungenisa umoya + ikhebula le-TV + i-oven microwave + uhhavini omncane wakudala + izitsha zasekhishini + ikhishi elinesiqandisi
Qaphela: Kungenzeka ukuthi singeze umbhede we-bunk wezindawo ezi-2, futhi sihlukanise igumbi lokulala elikhulu elinamakhethini emindeni enezingane ...
- Indawo yendlu yangasese engu-1 ngemuva kwestudiyo enosinki + ikhabethe eliphansi + isibuko + ikhabethe leshawa elibalulekile elinamajethi ahlukene + 1 WC
futhi ekugcineni emnyango:
- 1 isisitho selanga endlini ukudla kwasekuseni ngaphandle (ngaphandle kwelanga)!
- 1 umshini wokuwasha (ekungeneni)
Ungakwazi ukupaka imoto yakho ngaphakathi kwendawo ebiyelwe.
- Ukwehliswa kwentengo kusukela ezinsukwini eziqashisayo eziyisi-7 kanye nokwehliswa okuphawulekayo kusukela emavikini angu-4 okuqashwa (ukuqashwa ezinyangeni ezimbalwa kungenzeka)!
Ulwandle oluseduze cishe luyimizuzu eyi-10 NGEMOTO.
Ulwandle (ichweba elincane lokudoba) ngaphansi kwe-1 km (ukutholwa komhlume + isiqhingi sesihlabathi nge-kayak okungenzeka ngezakhiwo ezincane noma ngisho nangesikebhe esincane ngaphandle kwelayisensi!).
Ezinye izinkampani ezincane zinikeza ithuba lokuthola imihlume kanye neziqhingi zeGrand Cul de Sac Marin ezivela edolobhaneni laseSte-Rose 'ngesikebhe esinemoto'!
I-1 km ukusuka estudiyo: Amabhikawozi, Intengo Yomholi, i-Ecomax, i-Gifi, ikhemisi, ...
Eduze: e Ste-Rose ungavakashela Severin (rum) distillery nge wheel yayo gwedla, le Rum Museum, beya ebhishi (emabhishi Anse Mambia, Grande Anse lolwandle e Deshaies nge namathafa omangalisayo yonke endleleni ukuthi imikhondo lapho, ...), zibabaza amasimu omoba, ama-yam, uphayinaphu, ...
Sizojabula ukukwamukela eKarukera !!!
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sikunikeze ulwazi ongase uludinge!
Hlola ezinye izinketho ezise- Sainte-Rose namaphethelo